नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका डा. बाबुराम बाहेक प्राय सब माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
ARCHIVE, POLITICS » नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका डा. बाबुराम बाहेक प्राय सब माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
काठमाडौँ – आज विहान माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास लाजिम्पाटमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा प्रचण्ड, रामबहादुर थापा ‘बादल’, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरू छलफलमा थिए । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता देवेन्द्र पौडेललगायतका नेताहरुले आज पार्टी छाड्ने भएका छन् ।
देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कुमार पौडेल, महेन्द्र पासवान, वामदेव क्षेत्री, रामचन्द्र झालगायतका केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी छोड्दै छन् । उनीहरु सबै नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दैछन् । यसअघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने हल्ला भएका रामचन्द्र झा पनि अहिले माओवादी केन्द्र प्रचण्ड तर्फ लागेका छन् ।